Bepc - Seconde: Mila fanovana
jeudi, 13 juillet 2017 19:38
Nivaly omaly hariva ny valim-panadinana BEPC sy Seconde teto andrenivohitra. Manodidina ny 48 isan-jato teo ny taham-pahafahana.
Raha ny marina, tsy tokony omena lanja ve ny hitohizan'ny mpianatra ho any amin'ny liseam-panjakana? Nefa mifamadika indray izany, ka lasa fifaninanana izay mahazo naoty 12/20 vao tafiditra seconde, raha tokony izay afaka Bepc no miditra sekolim-panjakana.
Ny tsy fahampian'ny toerana an-tsekoly ve no anakanana ny zaza tsy hianatra, satria izay tsy afaka seconde izany ka tsy manam-bola sarampianarana any amin'ny sekoly tsy miankina dia mijanona tsy mianatra.
Ny rafim-pampianarana malagasy izany manosika ny mpianatra hianatra any amin'ny tsy miankina, raha tokony ny an'ny fanjakana no anandanja kokoa. Izay tsy manam-bola izany dia raraka.
Mitovy amin'izay koa ireo zaza tsy afaka 6eme nefa afaka Cepe, dia mijanona.
Dia variana ireo mpitondra miresaka hoe maro ny mpianatra tsy lasa lavitra ka miraraka an-dalana, ary 10% sisa tonga eny amin'ny oniversite, eny aza efa afaka Bac, mbola misy sivana hafa indray.
Vita fianarana anefa dia tsy mahita asa.
Lilly Cialis In Canada Tamsulosin 400 Mg Without Prescription [url=http://sildenafbuy.com]viagra[/url] Effets Secondaires Cialis Prix Kamagra Avec Ordonnance Cialis 10 Mg Apotheke
jeudi, 16 novembre 2017 22:04
Bo Levitra 20 Cialis Pas Cher Suisse Dutasteride 0.5mg Delivered On Saturday [url=http://cheapvia25mg.com]viagra[/url] How To Stay Erect Longer Priligy Seriennummer
mardi, 31 octobre 2017 13:26
Generic Worldwide Progesterone Without Perscription Medicine [url=http://cheapvia100mg.com]viagra[/url] Amoxicillin 850 Mg Side Effects Keflex For Urinary Tract Infection
vendredi, 27 octobre 2017 17:16
Cialis No Script Propecia Cheap No Prescription Cialis And Ecuador [url=http://orderviapills.com]viagra prescription[/url] Lioresal Acheter France Precio Cialis En Espana Amoxicillin False Positive Drug Tests
dimanche, 08 octobre 2017 12:43
Cheap Tadalis FarmР С–РЎС›cia Italiana Q Vende Cytotec [url=http://orderlevi.com]buy vardenafil 40 mg online[/url] Buy Medicine From Cannada Orlistat Cialis Y Tadalafil
Zithromax Chlamydia Dosage [url=http://genericcial.com ]cialis buy online[/url] Maxaquin
samedi, 23 septembre 2017 18:05